FASHIL & FOOWDO: Ciyaalka Xaafadda, Mise Askari dhab ah oo dowladeed! Wax ka ogow sababaha keenaya in Mushaarka ciidamada CIRIIRI galo | Hadalsame Media
Home Wararka FASHIL & FOOWDO: Ciyaalka Xaafadda, Mise Askari dhab ah oo dowladeed!...
FASHIL & FOOWDO: Ciyaalka Xaafadda, Mise Askari dhab ah oo dowladeed! Wax ka ogow sababaha keenaya in Mushaarka ciidamada CIRIIRI galo
(Muqdisho) 19 Maarso 2019 – Warsidaha Hadalsame Media ayaa u kuur-galay doodaha ku saabsan Mushaarka Ciidamada dowladda oo marar qaar kood la sheegayo inaan si toos ah loo helin taasoo ay sabab u yihiin waxyaabo badan oo is biirsday.
Ciidamada dowladda oo aan lahayn tiro koob sax ah oo laga duuli karo ayaa qayb ka ah in mar walba uu jiri karo jawareerka Mushaarkooda.
Qof walba oo qori iyo tuute heli kara waa Askari dowladeed haddana waxaad ku arkaysaa dariiqyada caasimadda Magaalada Muqdisho isagoon hal maalina howlgal aadin. Waxaa uu ka mid yahay ciidamada qaranka mana laha saldhig gaar ah oo uu ka tirsan yahay.
Xiliyada ay dagaaladu jiraan, wali waxaa uu kula joogaa xaafadda isagoo Macawis iyo qori wata, mararka qaarkoodna tuute.
Intaas oo dhan waxaa ka darran markaad si xaqiiqo ah u aragto Sarkaal Sare oo waliba darro jooyin badan ku tixan yihiin oo ciyaalka xaafadda ee ku qaraabada ah inta u yimaada dhahaya Waxaan rabaa inaad riwaayad ii matashaan oo aad askar beenaad ii noqotaan islamarkaana aad soo xaadirtaan waqtiyada ay guutada/horinta ciidamada aan xukumo qaadanayaan Mushaarka.
Tusaale, haddii uu sarkaalkaasi si dhab ah u xukumo 100 askari waxaa uu xiliga Mushaar bixinta la shir tagayaa 150 askari. Qof kasta oo ka mid ah Ciyaalka xaafadda ayuu boqolkii doolar ee la siiyo waxaa uu ku leeyahay Boqolkiiba 20%
“Aniga dhowr bilood kahor waxaa ii yimid nin sarkaal ah waxaana uu iga codsaday inaan ciyaalka xaafadda u qoro oo ay mushaar joogto ah heli doonaan, kaliyana laga rabo inay soo xaadiraan waqtiga Mushaar bixinta haddii loo baahdo. Tuutaha iyo wixii agab ah igu helee. Ugu yaraan waxaad ii soo qortaa 18 ciyaalka xaafadda katirsan,” sidaasi waxaa Hadalsame u sheegay nin dhalinyaro ah oo ku nool degmo ka mid ah Magaalada Muqdisho, kaasoo diiday inaan magaciisa shaacino. Waxaa uu sheegay Marqaatigasi in isagu labo bilood lacag ku qaadanayay qaabkaas, hase ahaatee hadda uu iska dhaafay markii uu ka cabsaday in qatari uga imaan karto.
Qaybta 12ka April ee ciidamada qalabka sida ayaa inta badan ah kuwa cabashooyinka mushaar la’aanta ay ka yimaadaan.
Warbixinta Hadalsame uu diyaariyay waxaa uu ku ogaaday in musuq-maasuqa ugu xun uu wali ka dhex jiro qaybta 12ka April waxaana saraakiisha Sar Sare ee qaybtaasi wali diwaankooda ku jiro dad aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida kuwaas oo kaliya u jeedka laga leeyahay ay tahay in la soo xaadiriyo waqtiyada mushaar bixinta.
Ilo- xog ogaal ah ayaa u sheegay Hadalsame in guddiga tirakoobka ciidamada qalabka sida ee dowladda ay dhowaan isugu yeereen saraakiisha ciidamada ee labada Shabeelle, kadibna Sarkaal kasta la waydiiyay inuu soo xaadiriyo askarta uu xukumo waayo waxaa loo sheegay in la qaadi doono howlgal Millatari ama duulaan.
Ugu yaraan shan ka mid ah Taliyaasha ciidamada ee amarka la siiyay oo markii hore sheegan jiray in midkiiba uu xukumo in ka badan 150 askari ayaa la soo shir tagay oo keenay wax ka yar 90 askari kiiba, halkaasna waxaa ka soo baxday in tirada inta ka dhiman ay ahaayeen askar ‘Fake’ ah ama been ah, kuwaas oo kaliya Mushaarka lagu qaato.
Dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12ka April ayaa isaga soo baxay fariisimo ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka Dhanaane iyaga oo ka cabanaya mushaar la’aan, waxaana deegaannadii ay ka baxeen la wareegay ururka Al-shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Kheyre oo xalay ka jawaabayay cabashada qaar ka mid ah ciidamada ayaa sheegay in arrintaasi aysan wax badan run ka ahayn oo aysan jirin.
’Ma jiro askari ka tirsan ciidamada dowladda oo diiwaan-gashan oo aan mushaarkiisa la siin, inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaangalin, fadlan geeya goobaha loogu tala-galay, ku diiwaangaliya ku koontaroola, xuquuqdoodana aniga iga soo doona’’ ayuu yiri ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya.
‘’Waxaan rabnaa in lacagta loo qoondeeyay ciidamada ay si toos ah u gaarto oo aan dhaxda laga bixin, kuwa gaaradaha waaweyn heysta waxaa laga rabaa in ay shaqadooda ahaato in shilinkii lagu aaminay dadkii loogu talagalay la gaarsiiyo’’ ayuu yiri ra’iisal wasaare Kheyre.
Previous articleRW Kheyre: Ma jiro askari ka tirsan ciidamada dowladda oo diiwaan-gashan oo aan mushaarkiisa la siin
Next articleCEEB: CNN oo adeegsanaya niman Soomaali ah oo weerar WIRIF ah ku qaaday Ilhaan Cumar + Muuqaal & Sawirro